ESI GBANYỤỌ FIREWALL WINDOWS - WINDOWS - 2019
Esi gbanyụọ Firewall Windows
Maka ihe dịgasị iche iche, onye ọrụ ahụ nwere ike iji gbanyụọ firewall wuru Windows, ma ọ bụghị onye ọ bụla maara otú e si eme nke a. Ọ bụ ezie na ọrụ ahụ, n'ụzọ doro anya, dị mfe. Hụkwa: Otu esi gbanyụọ Windows 10 firewall.
Omume ndị a kọwara n'okpuru ebe a ga-enye gị ohere ihichapụ firewall na Windows 7, Vista na Windows 8 (omume ndị yiri ya na-akọwa na weebụsaịtị Microsoft website //windows.microsoft.com/ru-ru/windows-vista/turn-windows-firewall-on-or-off ).
Ya mere, ebe a bụ ihe ị ga - eme iji gbanye ya:
Mepee ntọala firewall, nke na Windows 7 na Windows Vista pịa "Ogwe njikwa" - "Nche" - "Firewall Windows". Na Windows 8, ịnwere ike ịmalite ịpị "Firewall" na ihuenyo mbụ ma ọ bụ na ọnọdụ desktọọpụ na-ebugharị pointer pouse na otu akụkụ aka nri, pịa "Nhọrọ", wee "Ogwe njikwa" ma mepee "Firewall Windows" na nchịkwa nchịkwa.
Na ntọala ntọala aka ekpe, họrọ "Gbanyụọ Firewall Fire na Gbanyụọ."
Họrọ nhọrọ ị chọrọ, n'ọnọdụ anyị "Gbanyụọ Windows Firewall".
Otú ọ dị, n'ọnọdụ ụfọdụ, omume ndị a ezughị iji wepụ firewall kpamkpam.
Gbanyụọ ọrụ Firewall
Gaa na "Ogwe njikwa" - "Nchịkwa" - "Ọrụ". Ị ga-ahụ ndepụta nke ọrụ na-agba ọsọ, n'etiti nke ọrụ Windows Firewall na-agba ọsọ. Pịa aka nri na ọrụ a ma họrọ "Njirimara" (ma ọ bụ naanị pịa okpukpu abụọ na ya). Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa bọtịnụ "Kwụsị" ahụ, wee banye "ụdị mmalite," họrọ "Onye nkwarụ". Niile, ugbu a, firewall Windows ahụ kpam kpam kpamkpam.
Ekwesiri ighota na oburu na ichoro igbanye nchekwa ohuru - echefukwala iji megharia aka oru ya. Ma ọ bụghị ya, firewall anaghị amalite ma na-ede, "windo firewall adabaghị ịgbanwe ụfọdụ ntọala." Site n'ụzọ, otu ozi nwere ike ịpụta ma ọ bụrụ na e nwere ọkụ ọkụ ndị ọzọ na usoro (dịka ọmụmaatụ, ndị òtù nke antivirus gị).
Ntak kpochapụ Firewall Windows
Enweghị ikike ọ bụla iji gbanyụọ firewall Windows. Nke a nwere ike ịgọọ ma ọ bụrụ na ị wụnye usoro ọzọ nke na-arụ ọrụ nke firewall ma ọ bụ n'ọtụtụ ndị ọzọ: karịsịa, maka activator nke dị iche iche na-emeputa ihe omume, a na-achọta ihe a. Agaghị m akwado iji ngwanrọ na-enweghị ikikere. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere nkwarụ nke firewall ahụ maka kpọmkwem ihe a, echefula iji mee ka ọ dị na njedebe nke azụmahịa gị.